नेपाली रुपैयाँसामु कमजोर बन्दै अमेरिकी डलर, अन्य देशको विनिमयदर, कुनको कति ? - Himali Patrika
नेपाली रुपैयाँसामु कमजोर बन्दै अमेरिकी डलर, अन्य देशको विनिमयदर, कुनको कति ?
हिमाली पत्रिका ७ असोज २०७८, 7:48 pm
तुलनात्मक रुपमा पछिल्लो समय डलरसँग नेपाली रुपैयाँ बलियो बन्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०७८ असार मसान्तको तुलनामा २०७८ साउन मसान्तमा अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ ०.५ प्रतिशतले अधिमूल्यन भएको बैंकले जनाएको हो । बिहीबार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै बैंकले यस्तो बताएको हो ।
अन्य देशको विनिमयदर, कुनको कति ?
एक साउदी रियालको खरिददर ३१ रुपैयाँ ४४ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ६० पैसा तोकिएको छ । एक कतारी रियालको खरिददर ३२ रुपैयाँ ३८ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ५५ पैसा तोकिएको छ । एक मलेसियन रिँगिटको खरिददर २८ रुपैयाँ १२ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर २८ रुपैयाँ २६ पैसा तोकिएको छ ।
त्यस्तै एक कुवेती दिनारको खरिददर ३ सय ९१ रुपैयाँ ६९ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय ९३ रुपैयाँ ६९ पैसा तोकिएको छ । त्यस्तै एक बहराईन दिनारको खरिददर ३ सय १२ रुपैयाँ ८० पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय १४ रुपैयाँ ३९ पैसा तोकिएको छ ।
एक युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर १ सय ६० रुपैयाँ ८८ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय ६१ रुपैयाँ ७० पैसा तोकिएको छ। त्यस्तै कोरियन वन एक सयको खरिददर ९ रुपैयाँ ९६ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रीदर १० रुपैयाँ १ पैसा तोकिएको छ